Maitiro edhisheni | Recipe | Recipe
Rigorousness uye pachena.
Yedu yekugadzirisa mutemo yakavakirwa pamatanho manomwe anovimbisa kuti zvese zvemukati zvichave zvakaoma, zvakavimbika, zvakavimbika uye zvakajeka.
Tinoda kuti zvive nyore kwauri kuti uzive uyo anonyora chii munharaunda yedu uye ruzivo unofanira kuzviita.
Tinoda kuti iwe uzive kwatinowana, vatinofemerwa isu nenzira uye maturusi atinoshandisa.
Isu tinoshanda kuti tiite zvese izvi nekupa vaverengi mukana wekutizivisa nezve chero zvikanganiso zvavanowana uye chero shanduko dzavanoda kupa.
Painternet ine infoxication chirwere, zvinonyanya kukosha kuti ukwanise kusiyanisa pakati pezvakavimbika uye zvisina kuvimbika midhiya.
Isu tinosimbisa maitiro edu ekunyora pane manomwe mapoinzi, atinozovandudza pazasi:
Ruzivo rwese rwatinoparidzira inosimbiswa kuti ive nechokwadi chekuti ichokwadi. Kuti tizadzise chinangwa ichi, isu tinoedza kuzvinyora pachedu nezvakakosha zvinyorwa, zvinova ndizvo zvinotariswa nenhau, uye nekudaro tinodzivirira kusanzwisisana kana kududzirwa kusiri iko kweruzivo.
Hatina chero mhando yezvematongerwo enyika kana yekutengesa kufarira uye tinonyora kubva mukusarerekera, kuyedza kuve sezvo chinangwa sezvinobvira kana uchiendesa nhau uye uchipa hunyanzvi hwedu mukutarisa kwechigadzirwa uye kuenzanisa.
Mupepeti wega wega anoziva zvakakwana dingindira raari kushanda pariri. Isu tinobata nenyanzvi mundima yega yega. Vanhu vanoratidza mazuva ese kuti vave neruzivo rukuru mune iyo nyaya yavanonyora nezvayo. Saka kuti iwe ugone kuvaziva, isu tinosiya ruzivo nezve ivo uye zvinongedzo kune avo ezvehukama nhoroondo uye nhoroondo.
Zvese zvemukati zvatinoburitsa ndezvekutanga. Hatiteedzere kana kushandura kubva kune mamwe midhiya. Isu tinobatanidza kune inoenderana masosi kana isu takashandisa iwo, uye tinodoma varidzi vezvifananidzo, midhiya uye zviwanikwa zvatinoshandisa kupa ruzivo rwakanyatsojeka, zvichireva chiremera chakakodzera.
Hatishandisi manyepo kana ekunyepedzera misoro kuitira kukwezva muverengi tisina nhau chero chekuita. Isu tine hukasha uye tinotaura chokwadi, saka misoro yezvinyorwa zvedu inoenderana nezvamunowana mune edu zvinyorwa. Isu hatiburitse zvinotarisirwa nezve zvemukati zvisiri mumuviri wenhau.
Hunhu uye kugona kwezviri mukati
Isu tinogadzira zvinyorwa zvemhando yepamusoro uye zvemukati uye tinoramba tichitsvaga kugona mairi. Kuedza kutarisira zvese zvakadzama uye kuunza muverengi padhuze neruzivo rwavari kutsvaga uye rwavanoda.
Pese patinowana kukanganisa kana kutizivisa, tinoiongorora uye tochigadzirisa. Isu tine yemukati yekukanganisa kudzora system iyo inotibatsira kuti tigare tichigadzirisa zvinyorwa zvedu, pamwe nekudzivirira kuti zvisaitike zvakare mune ramangwana.
Isu tinogara tichivandudza zvirimo pane edu masaiti. Kune rimwe divi, kugadzirisa zvikanganiso uye, kune rimwe, kuwedzera dzidziso uye zvisingagumi zvemukati. Nekuda kwetsika iyi, zvese zvirimo mumawebhu zvinoshandurwa kuita zvemukati mareferenzi uye zvinobatsira kune vese vaverengi, pese pazvinoverengwa.
Kana iwe uine chero zvichemo kana mazano ekugadzira nezve chinyorwa kana munyori, tinokukoka iwe kuti ushandise yedu fomu yekutaurirana.
Nyorera kune Recipe